Ku-dhawaad 174-kun oo waxyeello kala kulmay daadadka Roobkii ka da’ay Baydhabo – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Agaasime-Gobaleedka Xafiiska Golaha Qaxootiga Norway ee Somalia, Victor Moses ayaa sheegay in ka badan Kala-bar dadkaasi haysanin gabaad ay kaga badbaadi karaan Roobka culus, iyadoo qaar ka mid ah u ula tegay Daadku.
Bulsho badan ayey Musqulahu ka burbureen, halka kuwo kale ay buuxiyeen daadadka roobkii ka da’ay Baydhabo, waxaana la saadaalinayaa inay roobab culus di’I doonaan isbuucyadda soo socda.
Mid ka mid ah Hooyooyinka Barakacayaasha ee magaalladda Baydhabo ayaa u sheegtay Hay’adda NRC sida ay ugu dhex umushay daadkii roobka, waxayna xustay inuu xanuunka qabtay iyadoo daadku soo buuxiyey qolkii ay ku jirtay, ka hor inta aysan gabaad ka raadsanin dad u dhawaa gurigeeda.
Sidoo kale, Agaasime-Gobaleedka Xafiiska Golaha Qaxootiga Norway ee Somalia, Victor Moses waxa uu tilmaamay inay in ka badan 427-kun oo qof waxyeello ka soo gaartay daadadkii cuslaa ee saameeyey guud ahaan Somalia bishan April.
Dhinaca kale QM ayaa sheegtay in ku=dhawaad 175-kun oo qof ka qaxeen guryahooda ama goobihii ay ka heleen gabaadka, iyadoo ay magaalladda Beled-weyne ku barakaceen in ka badan 122-kun oo qof.
Jubbaland tirada dadka waxyeelladda kala kulmay Daadadka ayaa la sheegay inay kor u dhaafeen 165-kun oo qof.
Warbixinta waxaa kalo olagu sheegay in ay 54-kun oo qof oo ku nool guryaha cooshadaha laga sameeyey duleedka Muqdisho uu saameeyey Roobku.
Dadad badan ayaa laga so oweriyey Goballadda Galgaduud, Gedo iyo Sh/dhexe.
Warbixinta QM waxaa kaloo lagu xusay inay ugu yaraan 3 qof oo 2 ka mid carruur ahaayeen ayaa la sheegay inay ku geeriyoodeen daadadka
Guud ahaan Somalia, 1.5 million o oqof ayaa u baahan gabaad wanaagsan, iyado oin ka badan 1.3 million oo kalena ka qaxeen Hoygooda abaarihii iyo colaadi ika dhacday Somalia sannadkii la soo dhaafay.